SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku. Mazano arimo anobva kuMusiki wedu. (2 Timoti 3:16) Zvarinotaura zvinogona kutibatsira chaizvo. Bhaibheri pacharo rinoti: “Shoko raMwari ibenyu uye rine simba.” (VaHebheru 4:12) Rine simba rekuchinja upenyu hwedu munzira mbiri. Rinotitungamirira muupenyu mazuva ano uye rinotibatsira kuti tizive Mwari uye zvaanotivimbisa.—1 Timoti 4:8; Jakobho 4:8.
Rinoshandura upenyu hwako iye zvino. Bhaibheri rinogona kubatsira pazvinhu zvakadai seizvi
Kugarisana nevamwe.—VaEfeso 4:31, 32; 5:22, 25, 28, 33.
Utano.—Pisarema 37:8; Zvirevo 17:22.
Kuzvibata.—1 VaKorinde 6:9, 10.
Kushanda.—Zvirevo 10:4; 28:19; VaEfeso 4:28. *
Mumwe murume nemudzimai vekuAsia vakatenda chaizvo mazano avakawana muBhaibheri. Sezvinongoitika kuvanhu vanenge vachangoroorana, zvainge zvakavaomera kuti vajairane uye vabudirane pachena pavaitaurirana. Asi vakabva vatanga kushandisa zvavaiverenga muBhaibheri. Zvakavabatsira here? Murume wacho, Vicent, anoti: “Zvandakaverenga muBhaibheri zvakandibatsira kuti ndigadzirise matambudziko emumba asi ndichizviita nerudo. Kuita zvinotaurwa neBhaibheri kuri kuita kuti mhuri yedu ifare.” Mudzimai wake, Annalou, anobvumiranawo nazvo achiti: “Kuverenga nezvevanhu vanotaurwa muBhaibheri kwakatibatsira. Iye zvino ndava kufara uye ndava kugutsikana nezvatinovavarira kuita muupenyu.”
Kuziva Mwari. Kunze kwekutaura nezvewanano yavo, Vicent anotiwo: “Kuverenga Bhaibheri kuri kuita kuti ndiwedzere kuva pedyo naJehovha kupfuura zvazvaiva kare.” Zvakataurwa naVicent zvinoratidza kuti chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti Bhaibheri rinobatsira pakuziva Mwari. Kunze kwekungobatsirwa nemazano anopiwa naMwari, kuverenga Bhaibheri kuchaita kuti umuone seshamwari chaiyo. Uchaonawo kuti anotaura kuti upenyu huchange hwakanaka zvakadii mune ramangwana pauchararama hunonzi “upenyu chaihwo” nekusingaperi. (1 Timoti 6:19) Zvechokwadi, hapana bhuku rakafanana neBhaibheri.
Kana ukatanga kuverenga Bhaibheri, woramba uchidaro, uchaona kuti upenyu hwako huchachinja uye uchaziva Mwari. Asi paunenge uchiriverenga, unogona kuva nemibvunzo yakawanda. Kana ukava nayo, yeuka zvakaitwa nemukuru mukuru wekuItiopiya akararama makore 2 000 apfuura. Aiva nemibvunzo yakawanda nezveBhaibheri. Paakabvunzwa kana ainzwisisa zvaaiverenga, akati: “Chokwadi, ndingadaro sei kana mumwe asingandirayiridzi?” * Akabva abvuma nemwoyo wose kubatsirwa nemumwe wevadzidzi vaJesu ainzi Firipi, uyo ainyatsoziva Shoko raMwari. (Mabasa 8:30, 31, 34) Saka kana uchida kuziva zvakawanda zvinotaurwa neBhaibheri, unogona kutumira chikumbiro chako paIndaneti pawww.jw.org kana kuti kukero iri pedyo newe pane dziri mumagazini ino. Unogona kutaura neZvapupu zvaJehovha zviri pedyo nekwauri kana kuti kuenda paImba yoUmambo. Wadii kubva watotanga kuverenga Bhaibheri nhasi, woita kuti rikutungamirire muupenyu?
Kana usina chokwadi kuti ungavimba here neBhaibheri, ona vhidhiyo inonzi Tingaziva Sei Kuti Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari? Unogona kuiwana kana ukaenda pajw.org pachikamu chakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO > BHAIBHERI
^ ndima 8 Kuti uone zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri vhura website yedu, jw.org. Tarisa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA.
^ ndima 11 Verengawo nyaya yakanzi “Zvakakosherei Kuti Uzive Chokwadi?” iri mumagazini ino.
Mamiriyoni evanhu ane chokwadi chekuti Mwari anovaona seshamwari dzake.